एनएमबि बैंकको खुद नाफामा वृद्धि, वितरण योग्य नाफा कति? – online arthik
एनएमबि बैंकको खुद नाफामा वृद्धि, वितरण योग्य नाफा कति?
शुक्रबार, कार्तिक २८, २०७७ | १२:३५:०८ |
एनएमबि बैंक लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको अन्त्यसम्ममा बैंकले ७३ करोड २९ लाख ७० हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ। यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४६ करोड ११ लाख रुपैयाँ अर्थात १६९.६२ प्रतिशत बढी हो। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिसम्ममा बैंकले २७ करोड १८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो। बैंकको खुद ब्याज आम्दानी बढेसँगै इम्पेरिमेन्ट चार्ज घटेका कारण खुद नाफा बढ्न पुगेको हो। सो अवधिसम्ममा बैंकको वितरण योग्य मुनाफा ५१ करोड ९१ लाख ५ हजार रुपैयाँ रहेको छ।
समीक्षा अवधिमा बैंकको खुद ब्याज आम्दानी १३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बढेर १ अर्ब ३५ करोड ७१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। त्यसैगरी, बैंकको सञ्चालन मुनाफा समीक्षा अवधिमा ६४ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बढेर १ अर्ब ५ करोड ४० लाख रुपैयाँ पुगेको छ।
१४ अर्ब ४४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ चुक्ता पूँजी रहेको यस बैंकको जगेडा कोषमा ५ अर्ब ३५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ र रिटेन्ड अर्निङ्गमा २ अर्ब ३४ करोड ५२ लाख रुपैयाँ सञ्चित छ। गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा बैंकको जगेडा कोषमा ५ अर्ब १२ करोड ७० लाख र रिटेन्ड अर्निङ्गमा १ अर्ब ७३ करोड ७२ लाख रुपैयाँ थियो।
पछिल्लो तीन महिनामा बैंकको निक्षेप १ खर्ब ३१ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँबाट बढेर रुपैयाँ १ खर्ब ४० अर्ब १६ करोड पुगेको छ भने कर्जा १ खर्ब १५ अर्ब ६६ करोडबाट बढेर १ खर्ब २७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
खुद नाफासँगै बैंकको प्रतिशेयर आम्दानी पनि बढेको छ। गत आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्ममा १० रुपैयाँ ८४ पैसा रहेको बैंकको यस्तो आम्दानी चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिसम्ममा बढेर २० रुपैयाँ ५८ पैसा पुगेको छ। सो अवधिसम्ममा बैंकको प्रतिशेयर नेटवर्थ १५४ रुपैयाँ २ पैसा रहेको छ भने मूल्य आम्दानी अनुपात १९.८२ गुणा रहेको छ।
त्यसैगरी, बैंकको निष्क्रिय कर्जा १.९७ प्रतिशतबाट बढेर २.२६ प्रतिशत पुगेको छ भने आधार दर १०.३३ प्रतिशतबाट घटेर ७.८५ प्रतिशत र स्प्रेड दर ५.०३ प्रतिशतबाट ४.३८ प्रतिशतमा झरेको छ।